कृषि र अर्थ – Yuwa Aawaj
काठमाडौमा : हावाहुरीसहितको पानीका कारण पोखरा र आसपासका क्षेत्रका मकैबालीमा क्ष'ति पुगेको छ । सोमबार दिउँसो ४।३० बजेको समयमा एकाएक आएको ठूलो हावाहुरीसहितको पानीका कारण पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३२ गगनगौंडा, बेलबुटे, मालमुल, राजाको चौतारा, वडा नं ३३ को बागमारा, लामगादी, पुडीटारलगायतका स्थानका मकै बालीमा क्षति पुगेको स्थानीयवासी भक्तिराम सुवेदीले जानकारी दिए आइतबार पनि हावाहुरीका साथ पानी आउँदा मकै भाँचेकामा आजको पानीले थप क्षति पु¥याएको उनले बताए । मकै लगाउने बेलामा खडेरी परेर समस्यामा परेका कृषकहरू पछिल्ला केही दिन यता दिउँसो ४।०० बजे पछि हावा हुरी सहितको पानी आउन थालेपछि लगाएको बाली पनि जोगाएर खान मुस्किल भएको बताउँछन् । हावाहुरीले भर्खरै लहरिँदै गरेका लहरे तरकारी बालीमा पनि क्षति पु¥याएको कृषकहरूको गुनासो छ । उता सिन्धुलीमा सोमबार पानीसँगै आएको हावाहुरीले चार घरको छानो उडाए
दार्चुला : व्यास गाउँपालिका–१ स्थित बुदीमा स्याउ फल्न थालेको छ । गत वर्ष लगाइएको इटालेली गाला र फुजी जातको स्याउ फल्न थालेको हो । कालापानी कृषि तथा पशुपालन फर्मले बुदीमा गत वर्षदेखि स्याउ खेती शुरु गरेको थियो । स्याउ लगाएको दोस्रो वर्षमै फल दिन थालेको फर्मका अध्यक्ष चरनसिंह बुढाथोकीले बताउनुभयो । पहिलो वर्ष एक हजार ५०० बोट स्याउ खेती परीक्षणका रूपमा लगाइएको हो । अहिले फल दिएको स्याउको स्वाद र उत्पादन हेरेर थप स्याउ खेती विस्तार हुनेछ । फर्मले चालु वर्षमा पाँच हजार २०० बोट थप स्याउ खेती विस्तार गरेको छ । सदरमुकाम खलङ्गाबाट दुई दिनको पैदल दूरीमा पर्ने बुदीमा स्याउ लगाइएको हो । बुदीमा रहेको कुल २०० रोपनी जमीनमा स्याउ खेती विस्तार गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष बुढाथोकी बताउनुहुन्छ । कुल छ हजार ७०० बोट स्याउ लगाइएको छ । यो क्षेत्रमा कम्तीमा १२ हजार बोट स्याउ खेती लगाउने योजना छ । बाट
काठमाडौं : निषेज्ञाले गर्दा आँपको बजार प्र'भावित हुँदा आँप उत्पादक किसान तथा व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । सरकारले को'रोना महामा'रीको रोक'थाम तथा निय'न्त्रणका लागि लगाएको निषेधा'ज्ञाका कारण आँप उत्पादक किसान तथा व्यवसायीलाई सहज रूपमा आँप बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या परेको छ । अहिले मालदह, कलकतिया, सिरीह, बम्बई, किसुनभोग, दशहरिलगायत जातका आँपको सिजन शुरू भइसकेको छ । तर, यसवर्ष आँपले अघिल्ला वर्षहरूमा झैं बजार पाउन सकेको छैन । यही कारणले गर्दा किसानहरूले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आएको हो । सिराहा कृषि ज्ञानकेन्द्रका प्रमुख किसुन देव राउतले निषे'धाज्ञाका कारण आँपले राम्रो बजार पाउन नसकेको बताए । सामान्य अवस्थामा उत्पादक किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेका आँप आफैले स्थानीय बजारसम्म लगेर विक्री गर्ने गथे । तर, जारी निषे'धाज्ञाका कारण स्थानीय हाट बजारहरू बन्द भएकाले त्यसरी बेच्न नसकिएको उन
काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कृषिक्षेत्रमा ३६ अर्ब २३ करोड ४१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यो बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ अर्बले कम हो ।गतवर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रको कुल बजेट ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सिलिङका आधारमा यतिबेला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिक्षेत्रको बजेटको खाका निर्माण गर्दै छ । बिहीवार एशोसिएशन अफ एग्रिकल्चरल जर्नालिस्ट (अनाज) ले आयोजना गरेको ‘कोरोना महामारी र कृषि बजेट’ विषयको भर्चुअल कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना शाखा प्रमुख डा. हरिबहादुर केसीले मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ३६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको बजेटको खाका तयार गरिरहेको बताएका हुन् । कृषिको कुल बजेटमध्ये करीब २५ प्रतिशत बजेट अर्थात् ११ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलमा खर्च हुने बताइएको
May72021 by Yuwa AawajNo Comments
कोरिया बाट फर्केर एक करोडको लगानीमा पशुपालन र रेष्टुरेन्ट सञ्चालन ।
गलेस्वर : म्याग्दीका एक व्यक्तिले छ वर्षसम्म कोरियामा कठोर परिश्रम गरेर कमाएको रु एक करोड स्वदेश फर्केर आफ्नै गाउँमा पशुपालन र रेष्टुरेन्टमा लगानी गर्नुभएको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरका ४० वर्षीय रमेश रावलले छ वर्ष कोरियामा कमाएको पैसा गाउँमै पशुपालन र रेष्टुरेन्टमा लगानी गर्नुभएको हो । रावलले बेनी–बागलुङ सडक खण्डको रत्नेचौरमा रु ५० लाखको लगानीमा गाईभैँसी पालन शुरु गर्नुभएको छ । गत सालदेखि गाईभैँसी पालन शुरु गर्नुभएका रावलको पशु फर्ममा आठवटा गाई र पाँचवटा भैँसी छन् । गाई र भैँसीबाट दैनिक १०० लिटर दूध उत्पादन हुने र त्यो दूध बेनी र बागलुङको बजारमा रहेका दूध डेरीमा बि'क्री गर्दै आएको रावलले बताउनुभयो । गत वर्ष कोरोनाका कारण लक'डाउन भएपछि उहाँले गाईभैँसीपालन शुरु गर्नुभएको थियो । रावलले अहिले रु ५० लाखको लगानीमा पशु फार्म नजिकै रेष्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि संर'चना न
May52021 by Yuwa AawajNo Comments
अण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च, कति पुग्यो !
चितवन : अण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । रोगका कारण कुखुरा मरेर उत्पादन घटेपछि मूल्य बढेको हो । लागत मूल्य अत्यधिक बढेका कारण मूल्य बढे पनि उल्लेख्य मुनाफा नहुने कृषकको भनाइ छ । नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष किरण ओलीका अनुसार आजदेखि फार्ममा ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट (३० वटाको) रु ३७० र मिडियमको रु ३४० पुगेको छ । यसअघिको मूल्यमा प्रतिक्रेट रु ३० वृद्धि गरिएको हो । ओलीको भनाइमा चार वर्षअघि अण्डाको मूल्य बढेर प्रतिक्रेट रु ३६५ पुगेको थियो । यसै वर्ष दुई महिनाअघि पनि प्रतिक्रेट अण्डाको मूल्य रु ३६० पुगेकामा केही दिनपछि घटेको थियो । एच ९ र रानीखेत रोगका कारण झण्डै २५ प्रतिशत कुखुरा मरेको किसान बताउँछन् । ओलीका अनुसार दैनिक २४ लाख अण्डा उत्पादन हुँदै आएकामा रोगका कारण घटेर १७ लाख हाराहारीमा झरेको छ । अण्डाको उत्पादनमा कमी आएका कारण मूल्य बढ्दासमेत लाभान्वित हुन नसके
May32021 by Yuwa AawajNo Comments
हिँउदे खडेरीका कारण गहुँ उत्पादनमा कमी ।
काठमाडौँ : लामो समयदेखिको खडेरीका कारण जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा लगाइएको हिँउदेबालीको उत्पादनमा क्मी आएको छ । जिल्लाको सेती, कालङ्गा, बहुलीगाड, सुनिगाडलगायतका नदी र खोलाको तटमा रहेका र सिँचाइको सुविधा भएका सीमित क्षेत्र आकासेपानीको भरमा खेती गरिने सबै ठाउ“को उत्पादनमा क्मी आएको छ । लामो समयसम्म परेको खडेरीका कारण गहु“, जौ, उवा, केराउ, मसुरोलगायतका हिउँदेबालीको उत्पादनमा क्मी आउँदा जिल्लामा चरम खाद्य सङ्क'ट हुने देखिएको छ । यस वर्ष खडेरीका कारण अधिकांश क्षेत्रमा लगाएको हिउ“देबाली सुकेर नष्ट भएपछि वर्षभरि कसरी परिवार पाल्ने हो भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको जयपृथ्वी नगरपालिका­१ का किसान अमृत शाहीले बताउनुभयो । “हिँउदभरि पानी नपर्दा लगाएको बाली सुक्यो । सिँचाइ हुने ठाउँमा अलिअलि उम्रेको थियो त्यो पनि असिनाले चु'टेर सखापै बनायो । एकातिर खडे'रीले सुकायो अर्कातिर असिनाले न'ष्ट भयो’’, उह
May12021 by Yuwa AawajNo Comments
विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले नेपाली घरेलु मदिरा (कोदोको र'क्सी) ब्रा'ण्डिङ्ग, बजा'रीकरण तथा प्रवद्र्धनको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश १ योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमको संयो'जकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलको सदस्यहरुमा प्रदेश योजना आयोग सदस्य मिना भण्डारी, मुख्यमन्त्री शेरधन राईका आर्थिक सल्लाहकार महेन्द्रबहादुर गुरुङ, स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका सहप्राध्यापक डिल्लीकुमार प्रसाई, प्रदेश कृषि निर्देशनालयका प्रमुख प्रकाश डाँगी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव अम्विकाप्रसाद चौलागाईं रहेका छन् । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव कमलकुमार थापा, प्रदेश योजना आयोगका अधिकृत राकेश निरौला, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक वनस्पती अधिकृत राजेश तामाङ कार्य'दलमा रहेका छन् । कार्यदल
Apr182021 by Yuwa AawajNo Comments
अकबरे खुर्सानीले बनायो ईलामका मदनलाई करोडपति, यसरी जोडे खुर्सानी बेचेरै डेढ करोडको सम्पत्ति । (भिडियो सहित)
काठमाडौं : खुर्सानी एक लोकप्रिय तरकारी तथा मसला बाली हो । खुर्सानी सबै खालको हावापानी भएको ठाउँ र बलौटे दोमट माटोमा उपयुक्त हुन्छ । खुर्सानीको खेती पहाडी क्षेत्रमा सामान्यतया गर्मी याममा र तराई क्षेत्रमा हिउँदको समयमा गर्ने गरिन्छ ।नेपालका प्राय सबै भू -भागमा अकबरे खुर्सानीको खेती हुने भएता पनि अकबरे खुर्सानी नेपालको पहाडी जिल्लाहरूमा राम्रो उत्पादन हुन्छ । नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, सङ्खुवासभा, भोजपुर लगायतका जिल्लाहरूमा यसको उत्पादन धेरै हुने गर्छ । खुर्सानी धेरै थरीका हुन्छन् । डल्ले, अकबरे, ज्यानमारा, जिरे आदि पिरो हुने गर्दछ भने अकबरे खुर्सानी असाध्यै मिठोे र लोकप्रिय खुर्सानी मानिन्छ । ईलामको सुर्योदय नगरपालिका–१२ आठघरेका मदन राई लामो समयदेखि कृषि पेसामा छन् । उनले ठूलो क्षेत्रफलमा व्यवसायिक रुपमा अकबरे खुर्सानी खेती गरेर मनग्य आम्दानी पनि गर्दै
Mar252021 by Yuwa AawajNo Comments
अमेरिकाबाट फर्किएका कृषि विज्ञद्वारा चितवनमा स्ट्रबेरी खेती, उत्पादन राम्रो हुने संकेत !
हिरालाल आचार्य : चचितवनमा स्ट्रबेरी खतीको उत्पादन राम्रो हुने संकेत देखिएको छ । बेरी संसार’ले गरेको परीक्षणात्मक खेतीका क्रममा चितवनमा स्ट्रबेरीको खेतीको सम्भावना राम्रो भएको पाइएको हो । बेरी संसार’कृषि विज्ञहरुले सञ्चालन गरेको एउटा कम्पनी हो । जसले नेपालमा स्ट्रबेरी खेतीको संभाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । यसले विदेशबाट बिरुवा ल्याएर नेपालमा खेती गरेर अध्ययन गरिरहेको छ । कृषि विज्ञहरु ससन देवकोटा र डा. राजेन्द्र गौतम यसमा आबद्ध छन् । यी दुबै जना अमेरिकामा कृषि पढेर र काम गरेर अनुभव बुटुलेका कृषि विज्ञहरु हुन् । ससन देवकोटाले पछिल्लो सयम चितवनमा स्ट्रबेरीको खेती गरिहेका छन् । उनले गरेको खेतीले राम्रो उत्पादन दिएको छ । देवकोटाले भरतपुर महानगरपालिका–५ स्वामी चोकमा स्ट्रबेरीको खेती गरेका छन् । उनले १२ कठ्ठा जग्गामा १५ हजार बिरुवा लगाएर यसको खेती गरिरहेका छन् । ३० लाखको लगानीमा खेती गरि
यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो सन्देश । (14894)
१. यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो सन्देश । (14894)
६. के मास्क धोएर लाउन मिल्छ ? दिनदिनै फेर्नुपर्छ कि एउटै लगाइरहे हुन्छ ? तपाई पनि थाहा पाउनुहोस । (1141)